आलुको डढुवा रोगः व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण – Newsagro.com :
June 8, 2016 December 16, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture Method, Agriculture Online newsagro.com न्युज एग्रो डट कम, Agriculture Publication, kathmandu, Nepal
फोटो: डढुवा रोग लाग्दा आलुको बोट र फलमा देखा पर्ने लक्ष्यण
अदुवावाली अनुसन्धान कार्यक्रम, कपुरकोट सल्यान
संसारका मुख्य खाद्यवालीहरु मध्ये प्रति हेक्टर उत्पादनमा पहिलो र कुल उत्पादनमा चौथो स्थान ओगट्न सफल आलु वाली हाम्रो देशमा करिव २०० वर्ष अघि देखि लगाईदै आएको छ । विउ आलु उम्रन ८ डी .से . तापक्रम चाहिने भएता पनि २० डी.से . को तापक्रममा यसको राम्रो उत्पादन हुन्छ । आलु खेतीबाट थोरै जग्गामा पनि अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सकिने हुदा यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाईन्छ । व्यवस्थित तरिकाले खेती गर्न नसकेको खण्डमा डढेलो जस्ता माहामारी रोग लागी सम्पूर्ण वाली नष्ट हुने हुदाँ कृषकहरु यसबाट घाटा व्यर्होन पनि वाध्य भएको पाइन्छ । आलुवालीको मुख्य शत्रुका रुपमा रहेको यो रोग एक प्रकारको ढुसीका कारणले लाग्छ ।
Phytophthera infestans नामक ढुसीबाट लाग्ने यो रोग सर्वप्रथम नेपालमा २०३२ सालमा देखिएको थियो । यो रोग माहामारीको रुपमा फैलिएमा ९०५ सम्म उत्पादनमा नोक्सान पुर्याउन सक्दछ । विरुवा हुर्केपछि आलुको पात, डाठँ तथा गेडा सबै भागमा तथा जुन अवस्थामा पनि लाग्न सक्ने यो रोग भण्डारणको समयमा समेत देखा पर्दछ । चितवनमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार यो रोग कार्तिक मध्य समयदेखि माघको मध्य सम्म बढी मात्रामा लाग्ने गर्दछ । नेपालमा यो रोग तराइमा जाडो समय र पहाडमा गर्मी समयमा धेरै पाइन्छ ।
सन् १८४५ मा युरोपमा यो रोग माहामारीको रुपमा फैलिदा आइल्याण्डमा पुर्ण रुपमा आलु वाली नष्ट गरी भोकमरी हुदा लाखौको ज्यान गएको थियो । खेतवारीमा यसको असर कम देखिने भएता पनि उत्पादन लिदा र भण्डारण गर्दा कुहिन गई ठूलो नोक्सान गराउने हुदा वैज्ञानिकहरु विभिन्न तरिकाबाट यसको नियन्त्रण गर्न प्रयासरत छन् । नेपालमा यसबाट औषत १५ % मात्र क्षतिको मुल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि आ.व २०६४–६५ को उत्पादन तथ्याङ्क (२०, ५४,८१७ मे टन) लाई आधार मान्दा प्रति वर्ष रु ३ अर्व ६२ करोड भन्दा वेसिको क्षति हुने गरेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यस कारण यसको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ ।
आलु खेति गरिने प्राय: सबै स्थानमा यो रोग व्यापक रुपमा हुने गरेको पाइन्छ । यो रोग लाग्दा निम्न लक्षणहरु देखाउछ:
सुरु–सुरुमा तल्लो पातका किनारमा वा टुप्पामा स–साना पानीको थोपाले कपडा भिजेको जस्तो दाग देखा पर्छन् जुन हल्का हरियो रंगको हुन्छ र केहि दिन भित्रै यी दागहरु खैरो वा हल्का कालो रंगमा वदलिएर जान्छन् । विहानीपख वा वादल लागेको अवस्थामा पातको तल्लो सतहमा हेर्यो भने कपासका त्यान्द्रा जस्ता मसिना भुवादार ढुसीहरु आँखाले सजिलै देख्न सकिन्छ । मौसम अनुकुल हुदै गएमा ढुसीको व्यापक वृद्धि हुदै जाने हुन्छ, जसले गर्दा डाँठहरुमा र फलमा आक्रमण गरी खैरो वा कालो दागहरु बढ्दै जान्छन् र अन्त्यमा छिटै पुरै बोटहरुलाई डढाएर मारिदिन्छन् ।
यसरी निरन्तर चिस्यान भएको अवस्थामा जमिनमाथिको सम्पुर्ण भाग डढ्न थाल्छ र कुहिएको गन्ध आउन थाल्छ । केहि समय भित्रै सम्पुर्ण खेत नै डढुवाले ग्रसित बन्न पुग्छ । यदि मौसम सुख्खा भयो भने दागहरुमा वृद्धि नभई खुम्चने र पात डढ्ने हुन्छ ।
पात तथा डाठमा विकास भएका ढुसीहरु माटोमा झरेर आलुको दानामा पनि असर पार्ने गर्दछ । रोग लागेका गेडामा कालो, खैरो र प्याजी पानी फोका जस्ता धब्बाहरु खिन थाल्छ र पछि कडा हुने गर्दछ । यस्ता रोग लागेका दानालाई बीचमा काटेर हेर्दा भित्रको गुदी खैरो देखिन्छ भने सतह दविएको जस्तो हुन्छ ।
जीवाणुको मुख्य स्रोत
माटो र हावामा रहेका ढुसीहरु नै रोगका मुख्य स्रोत हुन् । खेतवारीका छेउछाउमा फ्याकिएका आलुका बोटहरु, झारपातका ठूटाहरु, रोगग्रस्त वीउहरु यस रोगका स्रोतहरु हुन् ।
रात्रीमा धेरै शीत पर्ने, दिउँसो वादल लाग्ने, सिमसिम वर्षा भई वातावरणको तापक्रम १०–१८ डी .से. र सापेक्षिक आद्रता ८५–९५ % रहेको अवस्थामा यो रोग तिव्र रुपमा फैलिदा जान्छ र केही दिनभित्रै (प्राय ७ दिन) आलुको पुरै पलट डढेलो लागेको जस्तो देखिन्छ ।
माटोमा रहेका ढुसीको अवस्था (Oospores) उम्रन थाल्दछ र अनेकौ वीजहरु पैदा हुन्छन् । यी वीजहरुद्धारा जरामा पहिलो आक्रमण हुन्छ अथवा हावाद्धारा यी विजहरु फैलीइ पातमा वा अन्य जमिन माथिको भागहरुमा आक्रमण गर्दछ । खासगरी डढुवा रोगको प्रकोप बढ्नुको लागि ४ वटा मुख्य निम्न अवस्थाहरुको आवश्यकता पर्दछ ।
कमसेकम ४ घण्टासम्म रातमा सित परेको ।
कमसेकम १० डिग्री सेल्सियस वा सो भन्दा अलिकति माथिको न्युनतम तापक्रम भएको |
भोली पल्ट वादल लागेको ।
२४ घण्टा भित्र अलिकति वर्षा भएको ।
यस्तो प्रकारको वातावरणले रोगलाई माहामारीको रुपमा फैलाउछ । २४ घण्टा भित्रै जम्मै वाली सखाप हुने पनि सम्भावना हुन्छ । यसरी तापक्रम र सापेक्षित आद्रता उपयुक्त भएको अवस्थामा यो रागले सहजै महामारीको रुप लिन्छ ।
रोग नियन्त्रण गर्ने तरिका
१) उचित व्यवस्थापनद्धाराः
रोगी झारपातका ठुटाहरु, रोगी फल र अन्य झारपातलाई एकै ठाँउका जम्मा गरी जलाउने ।
रूख, विरुवा, कान्लो वा पहाडको छाँया नपर्ने अथवा पारिलो ठाँउमा मात्र आलु लगाउने ।
बोटहरुको बीचमा हावाको सञ्चार जरुरी हुने भएकोले सिफारिस भन्दा बाक्लो गरी नरोप्ने ।
मौसमको विचार गरी ठिक–ठिक मात्रामा सिंचाई गर्नुपर्छ र साथै निकासको व्यवस्थापन मिलाउने । सिचाँइद्धारा पनि रोग फैलिन सक्छ ।
उचित मलखादको प्रयोग गर्नुपर्छः नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास (NPK) क्रमसः १००ः१००ः६० कि.ग्रा. प्रति हे. उपयुक्त मानिन्छ ।
रोग लागेको क्षेत्रको विउ प्रयोग गर्नु हुदैन । रोग रहित विउ छनौट गर्नु पर्छ ।
आलु उत्पादन लिदा घमाइलो र सुख्खा दिनमा गर्नुपर्छ ताकी फल दुसित नहोस् । भण्डारण गर्दा पनि रोग लागेको र नलागेको छुट्याउनु पर्छ ।
रोगले संक्रामक रुप लिन सक्ने अवस्थामा राम्रो उकेरा दिएमा दानामा रोगले असर गर्न पाउदैन । खन्नु १५ दिन अगावै आलु दाना माटामै राखी सम्पुर्ण बोटहरु हटाउने । जसले गर्दा खन्न सहज हुनुका साथै फल राम्रो हुने गर्दछ ।
धेरै सानो आकारका विउ प्रयोग गर्न हुदैन, सानो विउहरु रोगी हुने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
निरन्तर अनुगमन गरिरहनु पर्छ र रोगी बिरुवा देखिना साथ हटाईदिनु पर्छ ताकी अरुमा सर्न नपाओस् ।
२) मौसम अनुरुपको सुरक्षाद्धारा
रोग लाग्ने अनुकुल वातावरण छल्ने गरी उपयुक्त समयमा आलु रोप्ने, कम्तीमा रोपेको ७५ दिन सम्म रोगको वातावरण नआओस् । जस्तो कि तराइमा मंसिर–पुष महिनामा रोगले बढि असर गर्ने भएको हुदा असोज वा मंसिरको अन्त्य तथा पुषको सुरुमा लगाएको वालीमा डढुवा रोगको प्रकोप कम हुने गर्छ ।
३) रोग अवरोधक जातद्धारा
पूर्ण रुपमा डढुवा अवरोधक जातहरु उपलब्ध नभएतापनि धेरै हदसम्म अवरोधक भएका जातहरु द्धारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्ता जातहरुमा कुफ्रिज्योति, खुमलसेतो–१, कुफ्रि बादशाह, जनकदेव, खुमल लक्ष्मी, कार्डिनल, खुमल रातो आदि ।
४) रासायनिक विधिद्धारा
क) विउ उपचार गरीः
यस रोगको ढुसी वीउको बाहिरी र भित्रि सतहमा समेत पुगेको हुन्छ । वीउबाट पनि रोग सर्न सक्ने भएकाले वेभेष्टिन नामक ढुसी नाशक विषादी ०.०१५ % वीउमा राम्ररी मिलाई विउ उपचार गर्नु पर्दछ अथवा Dithane M-45, Blitox 50 (2-3gm/ltr) or, Krilaxyl (1-2gm/ltr पानीमा) भण्डारण गर्नुपूर्व उपचार गर्ने । यसका साथै विउलाई १ः१००० HgCl2 (मरक्युरिक क्लोराइड) को भोलमा डुबाएर पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।
ख) झोल बनाएर छर्कनेः
रोग फैलनबाट बचाउनको लागि झोल बनाएर विषाधी छर्कन सकिन्छ । वीउ रोपेको २१ दिनपछि अथवा ६–८ इन्च लामो भएपछि पहिलो पटक छर्कने र प्रत्येक १० दिनको फरकमा छर्कन सकिन्छ, यसरी जम्मा ४–५ पटक सम्म विषादी छर्नुपर्छ । मुख्य गरी यसमा प्रयोग गर्न सकिने विषादी जस्तैः–Dithane M-45: Boardeux mixture; Blitox-10 (2-3 %) or, Krilaxyl (1-2g%) 2-3ml/ltr का दरले पानीमा भिजाएर छर्ने । धेरै वर्ष लगातार मेटाल्याक्सिलयुुक्त विषादीहरु प्रयोग हुदै आएको तर सो बाट डढुवाको रोकथाम हुन नसकेको अवस्था छ भने, यसको सट्टा डाईमेथोफर्म (एग्रोव्याट) वा क्लोरोथ्यालोनिन वा कपरअक्सीक्लोराइड (वलाइटस–५०) जस्ता विषादीहरु निर्देशित मात्रा अनुसार प्रयोग गरिएमा डढुवा रोगको रोकथाम हुन सक्छ । एकपटक डाइथेनएम–४५ र अर्कोपटक वलाइटक्स–५० वा फाइटोलान छर्नु बढि प्रभावकारी पाइएको छ ।
ग) वीउ भण्डारणः
वीउ भण्डारण उचित भेन्टिलेसन भएको ठाँउमा गर्नुपर्छ । कोठाको तापक्रम ५–६ डी.से. भन्दा तल हुनुपर्दछ । वीउलाई भण्डारण गर्नु पूर्व अर्गानिक मर्किउरलले वीउलाई उपचार गन पर्छ (सिफारिस गरिन्छ आइरल्याण्डमा) |
घ) जैविक विषादीद्धाराः
बजारमा पाइने निप्रोट (ट्राइकोडरमा भिरिडी) एक किसिमको जैविक विषादी हो । यसको प्रयोगबाट पनि डढुवा रोग धेरै मात्रामा नियन्त्रण हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई निम्न अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
निप्रोट १० ग्राम/लि पानीमा मिसाएर छर्ने ।
विषादी छर्दा पातको तल, माथि, डाँठ आदि सबै भाग राम्रोसंग भिज्ने गरी छर्नुपर्छ । शीतमा वा मध्यान्नको चको घाममा छर्नु हुदैन र साथै पानी नपरेको बेला छर्नुपर्दछ ।
संसारका मुख्य खाद्यवालीहरु मध्ये उत्पादकत्वको आधारमा पहिलो र नेपालको चौथो प्रमुख खाद्यवालीको रुपमा रहेको आलुबालीको उत्पादन बढाउन सकेको खण्डमा यसले प्रतिइकाई जग्गाको उत्पादनमा अरुवालीलाई सजिलैसित उछिन्न सक्दछ । यसको प्रमुख शत्रुको रुपमा रहेको डढुुुवा रोगको उचित नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा आलुखेतीबाट प्रसस्त आम्दानी लिन सकिन्छ । यो रोग लागिसके पछि नियन्त्रण गर्न ग्राहो हुने हुदा लगाउनु पूर्व सर्तकर्ता अपनाई लाग्न नदिनु नै वेस हुन्छ । यसको लागि वाली लगाउनुपूर्व वीउ उपचार देखि वाली लगाई सकेको २१ दिनपछि १० दिनको फरकमा अवस्था हेरी ढुसीनाशक औषधिहरु छर्नाले सहजै नियन्त्रण हुन सक्छ । यसका साथै खेति गर्ने तरिका, समय र प्रतिरोधक जातको छनौट गरेर पनि धेरै हदसम्म रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसरी डढुवाको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा आलु खेतीबाट मनग्य आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुरा स्पष्ट छ ।
← निम्बसको खाने तेल अर्को महिनाबाट
बदामको खेति प्रबिधि →
यो समाचार 35112 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34725 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 26040 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6784 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले